Ukusinda kweekati ezinkulu zaseAfrika: Iingcali zezilwanyana zasendle kunye nezokhenketho zikhathazekile
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Ukusinda kweekati ezinkulu zaseAfrika: Iingcali zezilwanyana zasendle kunye nezokhenketho zikhathazekile
inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
by Apolinari Tairo-eTN eTanzania
Iikati ezinkulu zaseAfrika
Ibhalwe ngu Apolinari Tairo-eTN eTanzania
Ukuphawula uSuku lweHlabathi lweNgonyama kulenyanga, ulondolozo lwezilwanyana zasendle eAfrika luxhalabile ngekamva lenye yeekati zayo ezinkulu zaseAfrika - iingonyama - kwilizwekazi emva kokunyuka kwenani labazingeli abazingela ngokungekho mthethweni abafuna amalungu omzimba wabo. Amaqela olondolozo lwezilwanyana zasendle kunye nemibutho yesisa e-Afrika bakhathazekile malunga nokunyuka kweziganeko zokuzingelwa kweengonyama, ikakhulu eNtshona Afrika apho ezi zilwanyana zidumileyo zisengozini enkulu, ngelixa ukuzingela ngokungekho mthethweni kuye kwanda ngakwimpuma nakumazantsi eAfrika.
Ukunyuka kweemfuno zeengonyama kuMzantsi-mpuma weAsia kuye kwabhebhethekisa ubugebenga eAfrika.
Ukungenelela kwabagcini bemfuyo kwiipaki zolondolozo lwezilwanyana zasendle ukuza kuthi ga ngoku kubangele ukungavisisani phakathi kwabagcini bemfuyo abangoonothwal 'impahlana.
Oku kukhokelela ekubulaweni kweengonyama ngetyhefu, ukudubula ngemikhonto, kunye neentolo ezinetyhefu.
Iziganeko eziphezulu ze Ingonyama ityhefu kukwaxeliwe naseMpuma Afrika njengeendawo ezihlala zizihambela ziziphindezela emva kokuhlaselwa kwemfuyo yazo, utshilo u-Edith Kabesiime, Umphathi Wemikhankaso Yezasendle kwiofisi ye-World Animal Protection e-Kenya eKenya.
Indawo eziGcina iiNdawo eziNgcweleyo- Ngorongoro Crater Camp
Uye wathi imfuno yeemveliso zeengonyama, njengamathambo kunye namazinyo, kwimveliso yamayeza esintu ekhula ngokukhawuleza ikwabhebhethekisile ukuzingela kwabo kwindle yaseAfrika.
U-Kabesiime uthe ezinye izoyikiso kwingonyama yase-Afrika zibandakanya ukufuya nokuzingela indebe, esongeza ukuba ukwenziwa kwemigaqo-nkqubo emitsha, nemigaqo, kunye nemikhankaso ephakanyisiweyo kubalulekile ekusindiseni izidlo kunye nokugcina ukomelela kwamakhaya endalo.
Inani leengonyama zaseAfrika liqikelelwa ukuba lehlile nge-50% kule minyaka ingama-25 idlulileyo. Iingcali zolondolozo zithi kukho isoyikiso sokwenyani ekusindeni kwengonyama ekulahlekelweni yindawo yokuhlala, intshutshiso kwimpikiswano yabantu, kunye nokukhula korhwebo olungekho mthethweni kwiindawo zeengonyama.
"Iingonyama zenza indawo ebalulekileyo kwindalo kunye nendalo, kwaye lomnyhadala awuzukunceda ekwaziseni abantu ngengxaki abakuyo kodwa nokuqaqambisa impumelelo engaphezulu ekufuneka siyenzile ukuqinisekisa uzinzo lwexesha elizayo," IKenya yaseTanyism Umphathiswa uMnu Najib Balala utshilo.
Amanani aphuma kuKhuseleko lweZilwanyana kwiHlabathi abonisa ukuba inani leengonyama eAfrika kungoku nje liqikelelwa kuma-20,000 200,000, lehla ukusuka kwiziingonyama ezingama-XNUMX kwiminyaka elikhulu eyadlulayo.
UMzantsi Afrika kuphela kwesizwe esivumela ukuzala kweengonyama ezinkulu, apho izilwanyana zihlala zigcinwa kwiikheyiji okanye kwiindawo ezibiyelweyo.
Ukubulala iingonyama emathanjeni abo nakwezinye iindawo kuye kwavela njengesoyikiso samva nje. Nangona amathambo engonyama engeyonxalenye yamayeza esintu amaTshayina, njengoko inani lamahlosi lincipha, ezi mveliso zifumaneka ngokulula zingena kwiimarike zezilwanyana zasendle ezingekho mthethweni njengezinye.
Iingonyama zezona zilwanyana zikhokelayo kwaye zikhokelayo, zitsala izihlwele zabakhenkethi kwi-safari eMpuma Afrika.
Apolinari Tairo-eTN eTanzania
Uncedo lwe-GTRCMC lusendleleni yokubuyisela uKhenketho eHaiti
Inqwelo moya entsha yaseIndiya enexabiso eliphantsi inokuba yinzuzo ...
IKiribati iya kucela umngeni kwimbono yakho ngobomi: Ukuvula kwakhona ...
I-Thailand, uKhenketho, kunye neZiza eziBomvu eziMnyama: Iindaba ezimnandi
Ubungqina bokugonywa ngoku bunyanzelekile eSan Francisco ...
IMarriott kwi-Mission eneehotele ezintsha eIndiya ...
Esona Sona Sixhobo sihle ngokuchasene ne-COVID-19 Delta eyahlukileyo